Nin Qiiq Isku Qarinayaa Qoray: ONLF iyo Saxaafadda Afka Somaliga wax ku qora – Rasaasa News
Jun 25, 2010 ethiopia, Nin Qiiq Isku Qarinayaa Qoray: ONLF iyo Saxaafadda Afka Somaliga wax ku qora, ONLF, somalia
Aan isweydiinee muxuu qoray isagu, waase kuma isagu?
Waxaan jeclaan lahaan in aan dadweynaha u sheego in bogga ogadennet.com, oo la sameeyey November 2008 in loo sameeyey in lagula dagaalamo laguna caayo Dr. M S Dolal. Sida naloo xqiijiyey waxaa wax ku qoro nin caan ah oo ay Jwxo-shiil ilmo adeer yihiin, oo kolkii hore ay dadku ugu yeedhi jireen Dr aniguse aanan ogayn meel uu Dr. ku noqday ama ku bartay waxbarasho heer Dr, laakiin dhib ma leh oo afkaa bartay iidhehdii hore.
Ninkan waxaa uu iska dhigaa in uu yahay oday aqoon yahan ah, laakiin waas sawir been ah ee waa oof wareenka halgankii ay ONLF waday iyo waxa loogu yeedho qabiil ku Jabhad.
Ninkan Odayga ah ayaa ka dhawr goor tagay Afrikada Bari isaga oo u ololaynaya, Jwxo-shiil. Sida naloo sheegay dad reerkooda ah ayaa ku yidhi war meesha Jabhad kuma haysaan tolkiina la kala dhimaye duqan khariban maad meesha iskaga tag dhahdaan. Ninkan isaga ah waxaa uu ku jawaabay waanu u sheegnay wuuse nadiiday anaga tanta ayaa nagu khasbaysay in aanu difaacno inta uu meesha joogo.
Hadaba ninkaas isaga aha ayaa waxaa la sheegay in kolkii uu dhawr goor shalay VOA ka maqlay garabka uu hogaamiyo Salaxudin ayaa Itobiya la heshiiyey qaracmay baa la yidhi.
Waxaana uu soo qoray Ciwaanka hore, oo aan is idhi kolkaan akhriyey wuxuu ula jeedaa ONLF Somali ma aha, oo sida ay Somalidu isu haysato isuma haysan doonto. Waxaan filayaa lamaba socdo waxa uu ku jiray mudo dheer adeerkiis Jwxo-shiil, oo eegga daad ku soo rogmaday.
Jwxo, wax Somali masuul ka soo qabtay waxaa ka soo gala Jwxo-shiil, kolkii uu labo sano joogayna waxaa uu xidhiidh la samaystay dagaal oogyadii Somaliya. Arintaas oo dhibaatadii ka dhalatay ay ONLF ku burburtay, adeerkiis Jwxo-shiil-na uu ilaa iyo maanta wax u quudhi la,a yahay kuwa habeen iyo maalin difaaca.
ONLF, waa Somali, Ogadeen bayna ka tahay, Ogadeena waa beelo. Waxaana dhab ah in beesha Jwxo-shiil ay kuligeed wada ONLF tahay, wax kalena ma aha ee waxay difaacdaa Jwxo-shiil. Beelaha kale ee Ogadeen arintaa way ogaadeen waxayna gudunta u qaateen kaligaa guran maysid ee Jwxo-shiil gadaal u joogso.
Waxaa dhab in aanu jirin wax la qariyo Macowna heshiis buu qaatay cwxo-na wuu u baaqay, waxaana dhab ah in cutubyo ay maqlidoonaan baaqiisa. Waxaan marna iyadu suurto gal noqonaynin in hal xubin oo beesha Jwxo-shiil, qabiil ku jabhad in ayna ku imanaynin baaqa Macow.
ONLF-na ninba reerkooda ayuu raaci, waana arin uu Jwxo-shiil ka shaqeeyey, waxaanse ka cabsan in ONLF ay noqoto sidii Nasrulahi sanadkii 1964, oo burburkeedii uu reebay colaad beeleedyo. Bismillahi Eebow naga xijaab.